Products > 2-chloro-5-aminopyrimidine (56621-90-0)
Kukwanisa kubudisa, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve2-chloro-5-aminopyrimidine (56621-90-0) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
5-Bromopyrimidine yakashandiswa mukushandiswa kweN-heteroaryl yakashandurwa kubva kuNX -UM-arylcarbazolyl yakagadzirwa nemarladium-catalyzed aerobic uye ligand-pasina Suzuki reaction, (9- (phenylethynyl) pyrimidine) kuburikidza ne microwave yaibatsira inonzi organic synthesis (MAOS) Sonogashira protocol.
Ichi chigadzirwa (s) chinogara pane kambani ye APICMO. Kana uri kutarisa peji ino somunhu asina kubhadhara, mutengo (s) unoratidzirwa ndiNhamba yeZveruzhinji. Kuti uone kutengesa kwako, pinda mukati uchishandisa nhamba yako yekodha, kana kuti iwe unyoresa waunoshandisa kuburikidza neimwe yemakambani eChipatimendi Chebasa. Kuti uise mutemo, taura ne APICMO Customer Service.
5-Bromopyrimidine (4595-59-9) Tsanangudzo
MDL Nhamba MFCD00006117
InChI Key GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Kemikari Zita kana Nyaya 5-Bromopyrimidine
Physical Form simba
Molecular Weight (g / mol) 158.986
Melting Point 69.0 ° kusvika 73.0 ° C
5-Bromopyrimidine (4595-59-9) Kuchengetedza nekubata
(4595-59-9) Tsanangudzo yenjodzi:
5-Bromopyrimidine Precautionary statement:
KANA MUCHINHU KUNYARA: Shamba nesipo yakawanda nemvura.
5-Bromopyrimidine (4595-59-9) Nyaya
A rosuvastatin calcium tsvina mumugwagwa wepakati wakagadzirira (nekushandura kwemichina)
Chiziviso chinorondedzera nzira yekugadzirira ye rosuvastatin calcium mukati mekusachena. Nzira yekugadzirira inosanganisira: kutora formaldehyde uye [4- (4-fluorophenyl) -6-isopropyl-2- (N-methyl-methanesulfonamino) -5-pyrimidyl] triphenylphosphonium bromide sezvinhu zviduku ...
5-Bromopyrimidine (4595-59-9) Kurayira Kukuru & Kutengo:
1 Kudzokorora nokuti 2-chloro-5-aminopyrimidine (56621-90-0)
Wanga uri kutarisira huwandu hwakawanda hwe2-chloro-5-aminopyrimidine (56621-90-0)? Pano pa APICMO, tine sarudzo yakasimba kwauri. Tine nyanzvi dzine unyanzvi hwokubudisa 2-chloro-5-aminopyrimidine mudiki uye yakawanda. Zvose zvatinogadzira zvinogutsa mitemo yekugadzira yeCGMP.
Chloro-5-aminopyrimidine zvichida inonzi 2-chloro-5-aminopyrimidine kana 2-Chloro-pyrimidin-5-ylamine ipirrimidine ye2, chromoro-5-aminoprimidine. Pasinei nokuva nemunhu uye simba pane nguva, unofanira kungwarira paunenge uchishandisa nokuti zvinogona kukonzera kuora mwoyo uye kuputika kweganda.
Ichi chigadzirwa chiri muboka re pyrimidines.
Kemikari yakagadzirwa ne2-chloro-5-aminopyrimidine
Synthesis routes of 2-chloro-5-aminopyrimidine
2-chloro-5-aminopyrimidine ine maitiro maviri emigwagwa
2-chloro-5-aminopyrimidine (56621-90-0) zvipamberi nemiti inopedzisa
2-chloro-5-aminopyrimidine chigadzirwa chemichero
Kemikari Name 2-chloro-5-aminopyrimidine
IUPAC Zita 2-chloropyrimidin-5-amine
Melting Point 198-199 ° C
Molecular Weight 129.549g / mol.
Molecular Formula C4H4ClN3
Infrared Spectrum chokwadi
Inchi Key DZBKIOJXVOECRA-UHFFFAOYSA-N
CAS Number 56621-90-0
CAS Max 100%
5-Pyrimidinamine, 2-chloro- (9CI)
Makemikari uye zvinhu zvemukati 2-chloro-5-aminopyrimidine
2-chloro-5-aminopyrimidine iripo semupfu tsvuku.
Covalent bonds count 1 unit
Zvinotenderera zvisungo kuverenga hapana
Hydrogen bonds Donor-1unit
Computed properties of 2-chloro-5-aminopyrimidine
Zita renzvimbo yacho ukoshi
Nhamba ye isotope atomu 0
Inonyatsotsanangurwa nhengo yeboka 0
Sttereocenter isina kufungidzirwa kuverengwa kwehurumende 0
Wakazvidzivirira akatsunga atomu kuverenga 0
Munhu asina hanya asina kufanirwa atom count. 0
Nhamba yeatomu yakaoma 8
Icho chinokonzerwa kanononi Ehe
Zvakakwana masasa 129.009 g / mol.
Mon isotopic mass 129.009 g / mol.
Pamusoro peti topological polar 51.8 A ^ 2
CACTVS shanduro yezvinyorwa zvidhi AAADcYBjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Uses of 2-chloro-5-aminopyrimidine
2-chloro-5-aminopyrimidine inobatsira mukutsvakurudza, kubudirira uye chigadzirwa synthesis.
Kudzivirirwa kwekutora mukubata 2-chloro-5-aminopyrimidine
Paunenge uchishanda ne2-chloro-5-aminopyrimidine yekutsvakurudza, kukurudzirwa kana chigadzirwa, iwe unofanirwa kutarisira. Izvi ndezvokuti mugumisiro unogona kuva nemigumisiro inokuvadza pahutano hwako kana uchinjwa. Izvo zvinotevera ruzivo rwakakwana pamusoro pekuchengetedza matanho ekufungisisa paunenge uchishanda ne2-chloro-5-aminopyrimidine.
2-chloro-5-aminopyrimidine yakaenzana nenjodzi.
Chigadzirwa chacho chinokuvadza pakuputika.
Zvinokuvadza meso zvinokonzera kutsamwa kukuru kweziso.
Ichi chigadzirwa chinogona kukonzera kusafema.
Izvozvo zvinogona kuguma neganda remhepo.
Zvishandiso zvekudzivirira pachedu
Paunenge uchishanda ne7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9), zvinokosha kudzivirira ganda rako, maziso pamwe chete nehutano hwemapfupa uchishandisa zvombo zvekuchengetedza. Izvi zvinoita kuti muviri wako uchengeteke kubva kune ngozi dzakanyorwa.
Ita zvekusachengetedzwa kusachengetedzwa.
Iva nechokwadi chokuti zvipfeko ndezvenguva refu kuti zvifukidze muviri wako wose.
Magirafu anodikanwa kuvhara maoko ako.
Ziso uye zviso zvekudzivirira
Bhara maziso ako nekuchengetedza magogo.
Izvo zvinogadziriswa zvingave zvakagadzirwa nechokudzivirira nhoo yekufukidza chiso.
Pasi pemamiriro ezvinhu akadai, kuchengetedzwa kwekufema kunogona kunge kusingadiwi. Zvisinei, usapinda mumhepo, guruva, mhepo, magasi kana spray. Zvirwere zvinoputika zvinogona kuchengetwa zvakagadzirira zvinokurumidza.
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9) kuchengetedza
1. Engineer control
Iro laboratori inofanira kuva nemhepo yakakwana kana kuti kushanda kunze.
Kana iri kushandiswa:
Usashandisa chigadzirwa usati wawana mirayiridzo yakakodzera.
Verenga uye unzwisise mirairo inopiwa
Kupfeka zvombo zvekuchengetedza uye zvipfeko.
Usasunungura chigadzirwa mumhepo.
Dzivisa kusvuta, kutora zvinwiwa kana zvokudya kana uchishanda nemakemikari.
Dzivisa kugaya kana kuisa mishonga yemakemikari.
Dzivisa kushanda pamwe nemakemikari paunenge uri pamuviri kana panguva yekurapa.
Usapisa kemikari pasi pekuvharirwa.
Chengetedza chigadzirwa chisina kushandiswa mubhodhoro rekuchengetedza uye urivhare.
Unganidzai madota uye makani asina chinhu uye muatakure ivo kuti varege. Izvo zvinhu zvinoshandiswa zvinoshandiswa kunyorwa uye zvakakiyiwa.
Bvisa nguo dzakasvibiswa.
Usatora mbatya dzakasvibiswa kubva kubasa kana kuti ushandise zvakare vasati vashamba.
Bvisa magirafu zvakanyatsonaka uye uzvichengete zvakanaka sezvinodiwa nematare ehurumende kana emunharaunda.
Bvisa bhenji rekushanda uye ugeze.
Shamba chiso chako nemaoko zvakakwana nemvura yakakwana yechando.
3. Kuchengetedza zviyero zve 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9)
Apo 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9) isiri kushandiswa, iva nechokwadi chokuti iwe uchengetedze kemikemikari pasi pemamiriro anotevera.
Nguva dzose shandisa chigadziko chepakutanga kuchengetedza makemikari uye cork iyo zvakasimba
Nyora bhodhoro zvakakodzera.
Ramba uri kure nekusvika kwevanhu vasingabvumirwi nevana.
Inzvimbo yekuchengetedza inofanira kuva nehuwandu hwemhepo yakachena.
Chengeta makemikari kunze kwezuva rakananga uye kupisa.
4. Matambudziko ekutanga
Zviitiko zvinowanzoitika zvinogona kuitika chero nguva yaunoshanda na2-chloro-5-aminopyrimidine. Kutsvaga kurapwa kana zviitiko izvi zvikakosha. Sezvo ma medichi angasawanika pakarepo, zvakakosha kugovera mazano ekutanga anotevera kune avo vakaurayiwa vasati vauya kuna vanachiremba.
Shandisa mvura yakawanda inotonhora kuti usuke muromo.
Kana munhu wacho asina chaanoziva, usatora chero chinhu kuburikidza nemuromo.
Shanya kana kukoka mishonga rubatsiro.
Mukana wekudzivirira mukati memakemikari:
Tambanudza kuurayiwa panze kana kune imwe nzvimbo ine nzvimbo yakakwana yekuputika.
Dana mishonga yekuwedzera kurapwa.
Paunenge uine maziso:
Shamba maziso nemvura zhinji inotonhorera.
Bvisa ziso rekuona lens kana iwe unazvo.
Ramba uchigunzva maziso kwemaminitsi gumi.
Kana mukaramba mukutsamwa, bvunza chiremba.
Bvisai zvinyorwa kubva panzvimbo yekutaurirana.
Geza nzvimbo yakakanganiswa kwemaminitsi e15 nemvura inotonhorera uye sese yakakwana.
5. Zvichida kuparadzanisa zviyero
Shandisa jecha kana vermiculite kuti uwane zvinoshandiswa. Isa pakaputika muzvikwata zvakakodzera kuti urege.
6. Kupisa moto
2-chloro-5-aminopyrimidine kana kuti iyo inogona kuunza moto. Kana izvi zvikaitika pangozi, zvinotevera ndezvokuchengetedza kwaunofanira kufungidzira. Shandisa mutezo wepolym, doro risingakwaniki, yakaoma makemikari kana carbon dioxide kuti udzimure moto. Kana zvikaputika, rega kurwisa moto uye ugobuda munzvimbo yacho. Kupfeka zvipfeko zvekuchengeteka uye zvipfeko paunodzima moto.
7. 2-chloro-5-aminopyrimidine maringe matsvudzo
2-chloro-5-aminopyrimidine haisi nengozi yekutakura pasi uye kumhepo.
8. Kurambidzwa kwemarara
Unganidza matongo uye uronge semarara chaiwo akagadzirirwa kurasa. Pamusoro pemarara kune kambani inoshandiswa kurasa tsvina.Handle tsvina maererano nemitemo yehurumende, yenyika kana yemunharaunda pamusoro pekurasa marara.
9. 2-chloro-5-aminopyrimidinereactivity uye kugadzikana
Pasi pemamiriro ezvinhu akachengetwa akachengetwa, chigadzirwa chacho chakasimba.
Chigadzirwa chacho hachifaniri kujekeswa kune zvakasimba mashizha kana acid.
Kupisa kwe2-chloro-5-aminopyrimidine inobereka carbon chloride, carbon oxides, uye nitrogen oksijeni.
2-chloro-5-aminopyrimidine chigadzirwa chinoshandiswa mukutsvakurudza uye kubudirira; naizvozvo hazvisi zvekushandisa kwevanhu kana zvemhuka. Chigadzirwa chacho chinofanira kutarisirwa uye kuchengetwa pasi pemitemo yakarongedzwa. Inofanira kurapwa nevashandi vakarovedzwa vane unyanzvi mura laboratory. Izvi zvinofanira kuva pasi pekuongororwa kwevatariri vanozivikanwa.
Iwe unogona kuva nechokwadi chezvigadzirwa zvemhando uye maitirwo kubva kwatiri pa APICMO. Izvi ndezvokuti tine boka reongororo rakapiwa mukurudziro nekutsvakurudza mune zvakasiyana-siyana zveminda kunosanganisira chromatography, chemakemikari yesayenzi, hupenyu sayenzi kuongorora sayenzi nevamwe.
2-chloro-5-aminopyrimidine kurongedza kukuru uye mutengo
Iwe unoshaya 2-chloro-5-aminopyrimidine mune zvakawanda zvakakura nokuda kwekutsvaga kwako, tsvakurudzo kana chigadzirwa chekutanga? Usazeza; Dhipatimendi redu rekuchengetedza vatengi rakagara rakagadzirira kukuteererai. Taura nesu uye ita mirairo yako.
National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine, Pubchem, 2-chloro-5-aminopyrimidine, Zvikamu 1-9.Pathway Therapeutics Limited Patent: US2011 / 9405 A1, 2011; Nzvimbo yepa patent: Peji / Peji peji 56;
Desmond J. Brown, John Wiley & Vanakomana, 15 Sep 2009, The Pyrimidines, peji 153,167,316,469, 503.
Robert Cooley ElderfieldWiley, 1957 - Heterocyclic makundi, peji 206, 270, 305.